CK6163 CNC ခုံစက်
ပလပ်စတစ် - သံဆလိုက်များ၏သက်တမ်းပိုရှည်သည်
Shandong Lu Young Machinery Co. , Ltd
ကျွန်ုပ်တို့၏ CNC စက်ကိရိယာများကိုတင်ပို့ပြီးဖြစ်သည်
နိုင်ငံပေါင်း 40 ကျော်နှင့်ကောင်းသောတုံ့ပြန်ချက်ရ။
Feature ၁ ။
Feature ၁။ ပိုမိုမြင့်မားသော ...
VMC850 တရုတ် 3axis ဒေါင်လိုက် cnc ဒေါင်လိုက် ...
Poduct အသေးစိတ်အချက်အလက်များ ၁ ။
VMC650 အမြန်နှုန်း (၃) ၀ င်ရိုးဒေါင်လိုက်သတ္တုအစ ...
စံသတ်မှတ်ချက် ၁။ ၃ ...
VMC420 China ၃ လုံး ၀ င်ရိုးကြိုး cnc ကြိတ်ခွဲစက်
ကုန်ပစ္စည်းအသွင်အပြင် ၁။ Casting: ...
ck0640 အသေးစားသတ္တုဂိုဏ်းအမျိုးအစားကိရိယာကိုင်ဆောင်သူ ...
အဓိကအကြောင်းအရာများ CK0640 H ...
၁။ ယေဘူယျအားဖြင့် ...
သွင်ပြင်လက္ခဏာများ ၁ ။
ယေဘူယျအားဖြင့်အဆိုပါ bullhead pla ...
အားသာချက် ၁ ။
/ပြီ / 09/2021
1. ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများဘာတွေလဲ? Composite ပစ္စည်းများသတ္တုနှင့်သတ္တုပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများ, Non- သတ္တုနှင့်သတ္တုပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများ, Non- သတ္တုနှင့် Non- သတ္တုပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများအရအောက်ပါပေါင်းစပ်သောပစ္စည်းများရှိပါသည် - Fiber c ...
စက်ကိရိယာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်အနာဂတ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလိုအပ်ချက်နှင့်မကိုက်ညီပေ။ ဥပမာအားဖြင့်စွမ်းအင်၊ အစားအစာ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာ၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ မော်တော်ယာဉ်နှင့်စိုက်ပျိုးရေးစက်ပစ္စည်းများစသည့်စက်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်များစွာအကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်။
CNC စက်ကိရိယာသည်ပရိုဂရမ်ထိန်းချုပ်သည့်စနစ်တပ်ဆင်ထားသောအလိုအလျောက်စက်ကိရိယာဖြစ်သောဒီဂျစ်တယ်ထိန်းချုပ်စက်၏အတိုကောက်ဖြစ်သည်။ Control system သည် program ကိုယုတ္တိနည်းအတိုင်း control Code များသို့မဟုတ်အခြားသင်္ကေတညွှန်ကြားချက်များဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပြီး၎င်းကို machine tool ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
စက်ကိရိယာတန်ဆာပလာများဒီဂျစ်တယ်နှင့်ထောက်လှမ်းရေးခေတ်သို့ ၀ င်ရောက်သည်
ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းမှုတွင်တရုတ်စက်ကိရိယာကုမ္ပဏီများသည်“ ထုတ်ကုန်စဉ်းစားခြင်း” မှ“ အင်ဂျင်နီယာဖြန့်ဖြူးခြင်း” သို့၎င်းတို့၏အဓိကစီးပွားရေးအတွေးအခေါ်အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။ လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းစက်ကိရိယာရွေးချယ်မှုကိုနမူနာများပေါ်တွင်အခြေခံခဲ့သည်။ စက်၏နောက်ဆုံးပို့ဆောင်မှု ...